Vashanyi vari kutarisana nemitemo mitsva yekufamba yeHawaii
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Vashanyi vari kutarisana nemitemo mitsva yekufamba yeHawaii
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Imwe yenzvimbo dzinonyanya kushanya pakufamba uye kushanya kuUnited States iHawaii, inozivikanwa se Aloha Hurumende. Nevanosvika makumi matatu ezviuru vanosvika zuva nezuva, mahotera akazara uye COVID-30,000 hutachiona huri kupararira zvisati zvamboitika.
Zvitsva zvifambiso zvekufamba zveHawaii (zvakagadziriswa)
Hawaii yanga ichipfuura nemuhuwandu hwayo hwehutachiona hweCOVID kubvira pakatanga denda. Iyi nhamba yepamusoro inodzikira chokwadi chekuti 60.8% yevagari veHurumende vakabaiwa zvakakwana.
Rekodha nhamba dzevashanyi vekumba vanosvika mazuva ese mu Aloha Nyika, kuchengetedza mahotera, mashopu nemaresitorendi azere.
Sei vanhu vazhinji vachida kushanyira Hawaii. Kunyangwe iyo Hawaii Tourism Authority haizive uye inoramba yakanyarara, kuyedza kutsvaga nzira dzekuodza moyo vashanyi kuti vaende kune iyo Aloha Nyika.
COVID hutachiona hutachiona pari zvino kunze kwekudzora muUS State yeHawaii - uye izvi zvinoshungurudza.
"Tinofanira kudzikisira nyaya dzedu iye zvino kuburikidza neZuva reVashandi, zvikasadaro kuchave nekurasikirwa kwehupenyu kusiri madikanwa uye kunosiririsa," akadaro Green mugwaro reFacebook ne Instagram nhasi mangwanani.
Lt. Gavhuna Green vakatsinhirwa naGavhuna weHawaii David Ige uyo akataura kuti kumiswazve kwekurambidzwa kunogona kunge kuri mupombi. Vati chiziviso chinogona kuitwa neChishanu. Ezvinorambidzwa zvinotarisirwa zvinogona kudzikisa huwandu hwevanhu vanobvumidzwa kusangana, pazviitiko, kutandarira kumahombekombe, mumaresitorendi, uye kuzvitoro.
Mumamiriro ezvinhu akaipisisa, inogona kumanikidza nzvimbo kuti dzivhare zvakare.
Click pano yeiyo yekuvandudza uye kudzidza izvo Gavhuna Ige akafunga uye zvazvino matanho munzvimbo yekudzikisa huwandu hwehutachiona.
Idzi inhau dzakaipa kune indasitiri iri kukura iri kuitika muHurumende. Ipo ichivharwa kutenderera kwenyika dzese, kushanya kwemumba kwave kwakakwira ikozvino zvichienzaniswa nenhamba dzisati dzaitika.
Kunyangwe iine kukura kukuru kwehuwandu hwehutachiona, huwandu hwekufa hwave hwakaderera kusvika pari zvino.
NeSvondo mumwe munhu akafa uye 437 kesi dzakanyorwa, uye vamwe vanhu vapfumbamwe vakaiswa muchipatara zvichiunza huwandu hwechipatara kusvika 9.
Yekupedzisira Hawaii COVID-19 yekudzivirira pfupiso inoti 1,784,678 mishonga yekudzivirira yakapihwa kuburikidza nenyika nehurumende zvirongwa zvekuparadzira senge yeSvondo, kumusoro gumi ne10,118 kubva Chishanu. Vanoona nezvehutano vanoti 60.8% yevagari vehurumende ikozvino vabaiwa zvizere, uye 68.3% vakagamuchira kanenge kamwe chete.
Vashanyi vanofanirwa kupasa iyo Yakachengeteka Kufamba chirongwa vasati vatenderwa kupinda muHawaii.
Zviitiko Indasitiri Kanzuru Partner neiyo Code ku ...
Magavhuna eUS anotambira kuvhurwa kwemuganho kwe ...
Vanenge makumi mana nevana vakaurawa, makumi masere vakakuvara muJakarta moto wejeri
Global Tourism Awards inozivisa vanokunda pasirese ...
Nzvimbo nyowani yechikwereti yakaziviswa nePlus
Mwoyo weIMEX America Kudzidza Chirongwa
African Tourism Board Sachigaro neMamishinari Zvino ...
Stage yakagadzika Saudi Style! 1000+ Nyanzvi Pfungwa dzekuenderera mberi ...
41 vanhu vakaurawa, vakawanda vashaika muIndia kudengenyeka kwenyika ...
Hondo Dziviriro Yevanhu muMyanmar: Iyo Yepamutemo ...
Dzokera kuBahamas mukuremekedza CHICOS yegumi yegumi
Hutano Canada Yambiro: Maoko Sanitizer Haana Kunyanya Hutano
Pegasus Airlines: Net Zero Carbon Emissions na2050
Atkins Kroll Anobatana neHafa Adai Pledge Chirongwa
Aer Lingus Inotangazve Dublin Vols kubva kuBudapest Airport
Russian Sputnik yekudzivirira mushonga wechiitiko chekushanya kwePhuket
Teamsters Rumbidza DRM Yekuita Pane Yakanaka Uye Yakavhurika ...
TLEE Spas inofumura ichangoburwa chirongwa: Willowbrook Spa ku ...
Vakadzivirirwa chete ndege yeKLM: Amsterdam-Singapore
Road to republic: Barbados inosarudza yekutanga ...
100+ UK neIreland Varatidziri Vakagadzirira WTM Inofadza...
Bahamas Ministry of Tourism Mazita FINN Partners seNew ...
Kufara Kugara muSeychelles: Kuravira kweParadhiso!
EU: Mitemo mitsva yekupinda muHong Kong inotyisidzira ...
Thailand, Tourism, uye Nzvimbo Dzvuku Dzvuku: Haazi mashoko akanaka
Hispanics akashandisa $ 113.9 bhiriyoni pakufamba mudzimba mu ...
Mhinduro yepamutemo ku COVID-19 Delta inokuvadza kufamba kwemhepo ...
Hawaiian Air Flight Attendant Akaburitswa Mushure mekuve ...
IMEX America Inotarisa Kumangwana Nechinangwa uye ...
Hasha Turkey Makara Anopisa Anokwezva Vashanyi Kubuda mu ...
Ungaimise sei vhidhiyo kubhidha dambudziko?
Sunga Seat Belt kana Dhiraipi Tepi: Nyowani YeMhepo Yekuchengetedza ...
Mushonga mutsva we COVID-19 mukugadzira: Hapana mhedzisiro!
4 US Marines, makumi matanhatu maAfghan vakaurayiwa mukurwisa Kabul ...
St. Kitts Iye Zvino Yave Nechikonzero Chekupemberera Kufamba Kwechikepe
Kudengenyeka kwenyika Kwakasimba kuchangonyorwa paChitsuwa che ...
London Heathrow Airport Matenga ari Kuchinja Bhuruu mune ...
Kiribati ichapokana nemaonero ako pahupenyu: Kuvhurazve ...
Masangano Ekushanyirana Anogona Kukurudzira Sustainable ...
COVID-19 Management Chirongwa chakatangwa naPremier ...
Taiwan Kuratidzira Kusvika kweSuppon Dutu Chanthu
Sandals® Luxury Inosanganisirwa Resorts Inotsvaira Caribbean ...
Harlan Accola anoti:
Nyamavhuvhu 22, 2021 pa07: 41
Saka iwe une chaiwo iwoyo maitiro ehutachiona seTexas ayo akasiyana zvakanyanya mukuvharira uye masking- saka iwe unofunga kuti zvichaita mutsauko kana iwe ukatanga kuve unonyanya kudzvinyirira? Pamwe mumwe munhu anofanira kunzwisisa sainzi. Tave padanho rekukanzura rwendo rwakakura rwemhuri muna Ndira kuenda kuHawaii- Izvo zvaizopfuura zviuru makumi maviri mune hupfumi hwenzvimbo- hameno kuti vangani vamwe vanhu vari kufunga zvakafanana?
Kimberly Mele anoti:
Nyamavhuvhu 13, 2021 pa00: 20
Ngatidzokerei patafura tigo sarudza sevose kuti tidzokere kugeza maoko, nekuchenesa asi zvakatonyanya, tichitora matanho ekuzvidzivirira nekuchengetedza daro. Chokwadi kucherechedza: tora mamwe magidhi uye mahebhu nezvinonhuwira mukudya, pinda muzuva uye kurovedza muviri. Chengetanai muminamato, uye ngatidzoserei hupenyu hwedu kuna Mwari tichinyatsoremekedza kuti Iye ndiani uye tinokumbira Mwari akatuma Mwanakomana wake JESU kuti atifire, kuti atiponesewo. Kana tikazvininipisa pamberi pake, tikatendeuka kubva kunzira dzakatungamira tikatsvaga chiso chake, ipapo aizonzwa kubva kudenga uye aizotiregerera zvivi zvedu nekupodza nyika dzedu. Munhu ane chikamu chikuru chekuita mukubatana kwaMwari. Mwari komborera America ~ Hawaii nenzvimbo dzese dzepasi.
Ngatirwisane izvi pamwe chete!
Alla Bugriyev anoti:
Nyamavhuvhu 12, 2021 pa08: 27
Kurambidzwa hakubatsire. Hawaii yakavharwa kwemwedzi yakawanda uye hutachiona hwakaramba huripo. Zvakafanana nemamwe mavirusi. Tsono kana chifukidzo hachikudzivirire iwe kubva pakurwara, kudya zvine hutano uye kurovedza muviri kuchaita basa riri nani… asi kuve chokwadi, mazuva ako akaverengwa naMwari, Hakuna munhu anogona kuwedzera hupenyu hwavo. Iye akazvitonga uye hapana kana bvudzi rimwe chete rinodonha kubva mumusoro wako pasina mvumo yake.
Nyamavhuvhu 12, 2021 pa08: 19
Kubva pane iyo data, iko kunzwisisa kwangu iyo spike muCovid kesi dzinonyanya kukonzerwa nevaHawaiian vagari vanofamba uye vachiihodha kumusha.
Nyamavhuvhu 12, 2021 pa08: 14
@ Debby - Gara muAmerica ?! Nguva yekupedzisira pandakatarisa, Hawaii iAmerica.
«Previous 1 2 3